Imibono yamakhasimende ethu ku-TrovaWeb Services: igama eliya egumbini lokufakwa kwezinsimbi leYanni
Angikaze ngibone ikhwalithi engaka ngamanani amancane kangako!
Ukuvota okuqhubekayo I-TrovaWeb kuyadlala ku imibono yamakhasimende: namuhla ubuze abanikazi be Igumbi le-Yanni ironing di Palermo bacabangani izinsiza zokubonakala yenziwe yingxenyekazi yethu.
"Ukunakwa, ukunakekelwa kanye nokwenza izinto ezintsha": lawa amagama ajwayelekile kakhulu akhulunywa ngamakhasimende ethu lapho sibabuza ukuthi bahlaziya kanjani imikhiqizo enikezwa ngabethu Umjikelezo Wokuhlelwa Kwedijithali.
Izinsizakalo zewebhu ezingavikeleki ngamanani amancane kakhulu
UDomenica Spatola, ongumnikazi wale nkampani, ujoyine ikwaya yokuhlaziywa ngomdlandla Isitshalo se-Yanni ironing ePalermo ngubani owathi uyaqiniseka: "Angikaze ngicabange ukuthi ngizoba nezinsizakalo ezisezingeni elifanele kangaka zewebhu ngokuncane kangaka!".
Amakhasimende amaningi abonga i-Showcase ebekwe kuwebhu
La Igumbi le-Yanni ironing itholakala ePalermo futhi sekunikezelwe iminyaka eminingi yokuhlanza ukomisa nokufaka izigqoko zezingubo, ama-duve nezingubo zokulala. Selokhu ajoyina i- I-Multimedia Circuit TrovaWeb, ngithole omkhulu ukubonakala online ukulandela Injini yokusesha ibhizinisi laqala ukwanda.
Njengoba sine-TrovaWeb Showcase amakhasimende ethu ande
UDomenica Spatola uthole ukubonga I-TrovaWeb malini ukubonakala kubalulekile ukuba neibhizinisi elinenzuzo. Kulokhu, usebe ngumsekeli ozimisele wezinsizakalo zethu zewebhu futhi ubancoma kubo bonke Abathengisi e ochwepheshe, utshela wonke umuntu ukuthi: "njengoba sinayo eyodwa Umbukiso weTrovaweb, siphindaphindeke amakhasimende ethu. Futhi ingxenye enhle kakhulu ukuthi akudingeki sibhekane nanoma yini mathupha, yenza konke Ithimba le-GetWeb!".
Tags: Izindaba imibono yezinsizakalo zewebhu ukubuyekezwa kwamakhasimende thola